17-Hydroxyprogesterone budada xayawaanka (630-56-8) HPLC8698% | AASraw
/ Products / Gowrado Dumar ah / 17-Hydroxyprogesterone budada budada
Category: Gowrado Dumar ah
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xakamaynta budada 17-Hydroxyprogesterone budada (630-56-8), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
17-Hydroxyprogesterone budada budada, Ilmaha ku dhow 500,000 waxay ku dhashaan marwalba Maraykanka sanad kasta. Dhalashada ilmo-galeenka (PTB), ama dhalashada ka yar tahay 37 isbuucyada, waxay dhigtaa dhallaanka khatarta sare ee dhimashada, waana sababta ugu wayn ee naafanimada maskaxda ee carruurta. Intaa waxaa dheer, qarashyada caafimaadka ee la xidhiidha PTB ayaa ku kacaya nidaamka daryeelka caafimaadka Maraykanka oo ka badan $ $ 26 sanad walba. Ka-hortagga PTB waxay muhiim u tahay kor u qaadista caafimaadka mustaqbalka fog iyo horumarinta dhallaanka dalka oo dhan.
17-Hydroxyprogesterone video caproate caproate
I.17-Hydroxyprogesterone xayawaanka aasaasiga ah Calaamadaha:
Name: 17-Hydroxyprogesterone budada budada
Formula kelli: C27H40O4
Miisaankani waa: 428.6
Dhibcaha Biyaha: 119 ° C
II. 17-Hydroxyprogesterone xero wareega budada ah
Magacyada kiimikada: 17-Hydroxyprogesterone budada budada
Magacyo kale: 17-OHPC, 17P, hexanoate
2. 17-Hydroxyprogesterone budada budada ah Isticmaalka:
Daroogada 17-alpha hydroxyprogesterone caproate waa daawo loo yaqaan 'pretestin' oo loo isticmaalo. Waxaa lagu xaqiijiyay waxtarka ka hortagga ama dib u dhigista dhalashada uur-ku-jirta ee haweenka uurka leh ee taariikhda dhalashada uur-ku-dhalashada ee hore. 1 Marka aad u baahato sida daroogada daroogada ah ee aan qaali ahayn, hadda waxay leedahay nooc calaamadeysan ah (Makena; AMAG Pharmaceuticals) oo qiyaastii 100 waqtiyo ka badan kuwa asalka ah. Bishii Febraayo 4, 2011, Shirkadda Pharmaceutical Company (oo markii danbe la beddelay Lumara) ayaa ogolaansho ka heshay Wasaaradda Cuntada iyo Maandooriyeyaasha Mareykanka si loo soo saaro oo lagu iibiyo Makena, kaas oo ka kooban maaddooyin firfircoon oo la mid ah sida ku cad qoraalka asaasiga ah. Oggolaanshaha waxaa ka mid ahaa magacaabida daroogada agoonta ah waxaana la siiyay shirkadda KV Pharmaceutical Company xuquuqda gaarka ah ee lagu soo saaro Makena, taas oo suurtagal ka dhigtay qiimaha sare. Daraasaddan, waxaan isticmaalnay xogta sheegashada caymiska si loo baaro rijeetooyinka loogu talagalay 17-alpha hydroxyprogesterone oo ka mid ah 4000 ganacsi ahaan ceymis leh (ma aha Medicaid) haween uur leh. Hadafkayagu wuxuu ahaa in la fahmo isticmaalka, kharashka, iyo natiijooyinka ka mid ah daroogooyinka calaamadeysan iyo kuwa darajada ah.
3.Waa maxay qiyaasta 17-Hydroxyprogesterone budada budada?
Mg 250 mar isbuucii (maalmo kasta 7); bilawga daaweynta u dhaxaysa toddobada toddobaad, maalmaha 16 iyo toddobaadka toddobaadka, 0 maalmood ee uurreyda; sii wad ilaa todobaad 20 (illaa toddobaadka toddobaadka, maalmaha 6) ee dhididka ama dhalidda, hadba midda kowaad.
Waxaan samaynay tijaabo indhoole ah, indho-indheyn oo ku lug leh haweenka uurka leh taariikhda la diiwaangeliyey ee bixinta umusha. Dumarka waxaa laga diiwaangeliyey xarumaha xarumaha caafimaadka ee 19 ee 16 illaa 20 usbuucyada uumiga oo ay si aan kala sooc lahayn loogu qoondeeyey xarunta dhexe ee xogta, xaddiga 2: 1, si loo helo labadii asbuuc ee marxaladda 250 mg 17P ama asbuuc kasta oo lagu duro mindhicir aan saliid lahayn; cirbadaha ayaa la sii waday illaa illaa gaarsiinta ama usbuucyada 36 ee jadwalka. Natiijada asaasiga ah waxay ahayd bilawga hore ka hor intaanay 37 usbuucyada uumiga. Falanqaynta waxaa la fuliyay iyada oo la raacayo mabda 'ujeedo-ula-dhaqmid.
Astaamaha aasaasiga ah ee haweenka 310 ee kooxda barnaamijka progesterone iyo haweenka 153 ee kooxda xuduudaha ayaa la mid ah. Daaweynta 17P waxay si weyn hoos u dhigtay khatarta keenista halisaha dhalmada 37 todobaadyadii jimicsiga (Jaantuska, 36.3 boqolkiiba kooxda progesterone iyo boqolkiiba 54.9 ee kooxda xuubka ka ah, halis qiyaas ah, 0.66 [95 boqolkiiba kalsoonida kalsoonida, 0.54 ilaa 0.81]), (35 ilaa 20.6), iyo keenista wax ka yar toddobaadka toddobaad ee 30.7 ee jadwalka (0.67 boqolkiiba 95 boqolkiiba boqolkiiba 0.48 boqolkiiba; 0.93 boqolkiiba 32 boqolkiiba; , khatarta udhaxaysa, 11.4 [19.6 boqolkiiba isku-kalsoonaanta kalsoonida, 0.58 ilaa 95]). Ilmaha dumarka ah ee lagu daweeyo 0.37P waxay si aad ah hoos ugu dhigeen qiyaasta xididada 'enterocolitis', dhiig baxa, iyo baahida loo qabo oksijiin dheeri ah.
Isku-darka todobaadlaha ee 17P ayaa sababay hoos u dhac ku yimid heerka celinta haweenka uurka leh ee ku soo noqnoqday haweenka khatarta ugu sareysa ee keena dhalmada ka hor iyo in la yareeyo suurtagalnimada dhibaatooyin dhowr ah oo carruurtooda ah.
4.How ka shaqeeyaa kortexolone 17-Hydroxyprogesterone kalluunka budada?
17a-hydroxyprogesterone caproate (17-OHPC) waa borogar goojo ah. Jirka bani'aadamku ma samyn karo meco-furuq. Magaca kale ee Caproate waa "hexanoate," oo ah aaladda laga soocay "hexanoic" ama "caproic" acid. Foomka 17-OHPC waxaa lagu soo bandhigayaa sawirka. Dhakhaatiirta qaarkood waxay yiraahdeen 17-OHPC waxaa laga helaa riyaha. Tani waxay u muuqataa inay tahay muqaal, sababtoo ah aqoonsiga maaddadani ka timid dareeraha jidhka ee dabiiciga ah, unugyada riyaha, ama wax noolaha kale oo aan la xaqiijin karin raadinta suugaanta.
Saamaynta 17-OHPC ee dhererka ilmagaleenka ee bukaanka qaba taariikhda ≥ 1 dhalashada ilmo-dhalashada ee loo qoondeeyey in lagu siiyo 17-OHPC iyo koox aan la daaweynin. Waxba farqi maaha in dhererka dheriga ilma-mareenka ee muddo kadib lagu arkay dumarka helay 17-OHPC. Taas bedelkeeda, progesterone siilka ayaa hoos u dhigtay heerka dhimista ilmo-galeenka ee bukaanada qaba taariikhda dhalmada ka horeysa ama yaraanta ilmo-galeenka hore.
17 alpha-hydroxyprogesterone caproate (17P) waa nooc caan ah oo progesterone ah oo loo soo bandhigay in lagu yareeyo soo noqoshada PTB ee haweenka leh habdhaqanka shimbiraha ee leh taariikh hore. Haweenka qaba taariikhda hore ee PTB waxay u badan tahay inay yeeshaan ilmo kale oo ilmo kale ah marka loo eego dumarka aan lahayn. Sida caadiga ah dhakhaatiirta, dhakhaatiirta 17P waxaa loo maamulaa isbitaallada todobaadlaha ah laga bilaabo toddobaadka 16-24 illaa dhalida illaa dhalashada. Cilmi-baarisyada ayaa muujinaya in maamulida 17P ee haweenka xaqa u leh ay yareeyaan fursadda ah inay yeeshaan PTB kale boqolkiiba 33. Sannad kasta, qiyaastii, haweenka uurka leh ee 30,000 waxay buuxinayaan shahaadada waxaana loo qaadanayaa inay xaq u leeyihiin 17P.
Hoos u dhigista khatarta uureysiga uur-ku-jirta haweenka uurka leh ee uurka leh ee leh taariikh taariikhda dhalashada ilmo-dhalasho ee isbitaal ah (oo loogu talagalay daroogada agoonta ee FDA isticmaalka).
Wax-ku-oolnimada ayaa lagu go'aamiyey iyada oo lagu saleynayo hagaajinta qayb ka mid ah dumarka bixiyay '<37 usbuucyada jadwalka; macaashka tooska ah ee daaweynta (tusaale ahaan, horumarinta cudurada dhalmada iyo dhimashada dhalida) aan la dhicin.
Badbaadada iyo waxtarka waxay muujineysaa oo keliya dumarka leh dhalashada ilmo-dhalasho ee hore; looguma talagelin isticmaalka dumarka leh jajabyo kala duwan ama waxyaabo kale oo khatar u ah dhalmada ka horeysa.
ACOG waxay ku talineysaa in la siiyo taageero dheeri ah progesterone si looga hortago uur-celinta hore ee haweenka uurka leh ee uurka ku jira iyo uur-ku-dhalasho hore uur-ku-dhalis ah <HNOX toddobaadkii hore ee uur-ku-jirka sababtoo ah foosha isdaba-joogga ah ama dillaacista mudda dheer.
6.17-Hydroxyprogesterone budada budada:
7.17-Hydroxyprogesterone xayawaanka budada ah:
8.17-Hydroxyprogesterone kalluunka duubista:
9.Doomaha 17-Hydroxyprogesterone budoatka ayaa leh wax saameyn ah?
Progestin synthetic; oo lagu soo saaro qiyaasta 17a-hydroxyprogesterone, oo ah shey-macaan oo dabiici ah oo progesterone ah, oo leh cadro caproic.
Haysashada firfircoonida progestogenic; waxay u muuqataa in ay soo saari karto saameyn balaadhan oo joogto ah oo sareeya ee endometrium ka badan progesterone.
Uma muuqdo in uu qabo orrogenic, antiandrogenic, estrogenic, ama waxqabadka glucocorticoid.
Nidaamka ficilka ee yareynta khatarta uureysiga dhalmada ee aan soo noqnoqon oo aan la ogaan
III. 17-Hydroxyprogesterone budada budada HNMR
IV. Sidee loo iibsadaa 17-Hydroxyprogesterone budada furka laga bilaabo AASraw?